Hilton Hurghada Long Beach Resort 4 * (Egypt). Izibuyekezo zezivakashi mayelana ehhotela nezithombe
Hilton Hurghada Long Beach Resort - Indawo isakhiwo stylish kakhulu zezakhiwo ehhotela, esimelela ogwini, endaweni yokungcebeleka ka Hurghada. Ngamanye amazwi, njengoba besho ibhizinisi ehhotela, itholakala emgqeni wokuqala. It kungokwalabo uchungechunge edumile "Hilton" ehhotela yavula ngonyaka ka-2003. Izibuyekezo Rave ngalokhu resort ngokuvamile kwesokunxele amateur snorkel futhi diving, ikakhulukazi ngenxa indawo yayo kufanelekile lezi izinhlobo amanzi ezemidlalo kanye ngangokunokwenzeka. Naphezu kweqiniso lokuthi Hilton Long Beach Resort 4 izinkanyezi ukukala, layo amakamelo, inkonzo, abasebenzi, ukudla kanye nezinye izidingongqangi okwesikhathi izinga emangalisayo iholide kuhle ukuthi ngisho izivakashi ngikhetha kakhulu kungaba akuvamile okuthile ukuze bakhononde ngamamaki. travel ejensi Abaningi ukuthengisa izinkambo Hilton Hurghada Long Beach Resort 4 *. Apltravel - omunye wabo. Le nkampani futhi ezithakazelisayo ukuthi ungakwazi ukuthenga ithikithi e-resort inthanethi. Ake sibone ukuthi yini okulotshwe ngalokhu ehhotela, izivakashi abaye bahlala lapha.
Kusukela Hilton Hurghada Long Beach Resort Indawo abantu Hurghada ehhotela enkabeni resort - amakhilomitha amabili kude futhi sezindiza - cishe ikota yebahlali ihora kude. ngaphandle nje emasangweni - esitolo lapho ungakwazi ukuthenga utshwala, izithelo, baby ukudla, izinto eziyizikhumbuzo. Ihhotela eyakhelene edumile "Titanic kuyona" izakhiwo "Koral Bich Rotana" futhi "Golden Five". Uma uza kuze kube sekugcineni (kanye phambi kwakhe, cishe ingxenye yesine yabantu ihora ethutha ngejubane kancane), khona-ke zombili ungabona imigqa izitolo. Eduze kwesango stop ehhotela ibhasi, lapho ungakwazi ukuya maphakathi Hurghada. Budebuduze kuyinto isikhungo diving "Sadko" lapho abafundisi Russian ukusebenza.
Iminyaka engaphezu kwamashumi amabili kule ndawo yeholide ukuza bakithi. Emibhalweni yaminyaka yonke zezinkampani zokuvakasha wathi efika ngendiza yokuqala charter ukuba Hurghada sezindiza ezivela eRussia ngo-1993. Kusukela ngaleso sikhathi, ukuthandwa kulezi zindawo iyokwanda esikhathini isilinganiso kuphela. Futhi amaholide abaningi bafuna ukuthenga amathikithi 'eGibithe, Hurghada. " Hilton Hurghada Long Beach Resort 4 * - kwelinye lamahhotela, lapho umfudlana izivakashi luyanda njalo ngonyaka. Nakuba lezi zindawo ezibhekwa godforsaken emuva sixties kwekhulu elidlule, futhi manje nansi yokuhlala wesifundazwe. EDolobheni Elidala, okuthiwa i-El Dahar, siphile ikakhulukazi bendawo nezivakashi hamba lapha ukuze uthole izinkambo nezitolo ngesikhathi isikhumbuzo esitolo zokudla izimakethe. Lesi sikhungo esisha, noma "Sakkala", ezakhiwe ngendlela yesimanje. Kuzakuba kuqashwe efulethini, usebenza "McDonalds" futhi resort amahhotela. Nazi nightlife odumile Hurghada, inhlanzi zawo zokudlela kanye nezitolo ezinkulu nge amanani fixed. Kujana eningizimu owelula ukuvakasha kanye owawusuka emahhotela aphambili, esisogwini komugqa wokuqala. Ukuze zone abahamba ngezinyawo we izivakashi abathanda ukuhamba kusihlwa. Futhi ezindaweni ezikude kakhulu zaleli okuthiwa "Hurghada encane", okuyinto empeleni obuphelele omkhulu elisogwini amakhilomitha amane, siqukethe amahhotela amane anamakhulu amahlanu inkanyezi. Kukhona ngokuyinhloko esekelwe amahhotela entsha futhi zikanokusho kunazo. Hilton Hurghada Long Beach Resort 4 * e Hurghada ilapha. Ngakho-ke, kulolu hlangothi, enkabeni yedolobha ukuze uthole kude kakhulu, futhi nomunye - yonke ingqalasizinda eyinkimbinkimbi resort "ngensimbi" yizivakashi.
Ihhotela Hilton Hurghada Long Beach Resort 4 * Izibuyekezo mayelana nokuthi iziphi izinhlelo esiyihlaziyayo, unensimu esikhulu kakhulu futhi uzilungise. endaweni yayo - square metres ayizinkulungwane ezingamakhulu amane. Ihhotela siqukethe emaphakathi, izakhiwo ezimbili umndeni izindlu cishe ikhulu, okuyinto izivakashi ushayele Bungalow. Wonk 'umuntu lapha nice kakhulu futhi uyabukeka emehlweni. Izisebenzi zendawo njalo okuthile uyawathena, mows, elungisa futhi ahlanze. Ngaphezu izimbali oluhlaza futhi elimnandi of epaki, ihhotela inama-sizinda esihle. Insimu omkhulu, kodwa ukhululekile futhi sanitized kakhulu. Izivakashi bhala ukuthi kwanele ukuhamba ngayo, bengafuni ukuya ngaphandle kwehhotela. Ngisho ngeviki noma izinsuku zibe yishumi, abazange uhlupho enyuka kule ndawo. Kunezindlela eziningana ezitolo siqu - futhi boutiques, nezitolo nemimoya, lolwandle izesekeli, eziyisikhumbuzo. The main isakhiwo ehhotela has ikheshi. Yokulinda libanzi futhi ukhululekile ungafunda amaphephandaba. Budebuduze reception - igumbi elikhethekile lapho ungakwazi ukufaka umthwalo uma efika kusukwe sekwephuzile noma ekuqaleni kuka. Ehhotela kukhona yokupaka izimoto. Nobuhle salon, a spa, zemidlalo, isikhungo ibhizinisi, ihholo inkomfa - konke lokhu kukhona izivakashi noma izinhlangano abathenge nezingxoxo. Hilton Hurghada Long Beach Resort Indawo abantu has disco ayo, ngakho-ke futhi izivakashi akudingekile ukuya Hurghada, ukuze ujabule. Njengoba insimu, njengoba sekushiwo, amaholide ezinkulu futhi ngokuvamile ukuhamba futhi ukuthatha izithombe lapho, ngezinye izikhathi sikhohlwe izinto ezindaweni ezahlukene - Cape, izikhwama ikhamera ngemali. Abasebenzi konke lokhu kuthatha futhi unika, uma ubheke abasebenzi. Ayikho ukweba awuzange waphawula.
Indlela afake izivakashi
Amagumbi ngesikhathi Hilton Hurghada Long Beach Resort Indawo abantu athobele "quartet" yaseYurophu. Ziyakwazi ezinkulu, enikeza umbono isikhala nenduduzo. Izivakashi ukubabiza omkhulu. Ifenisha ezinhle, enhle, ngokhuni, alungiswa. Amakamelo zenzelwe izivakashi eyodwa, ababili noma abathathu. Kukhona hhayi kuphela amakamelo ejwayelekile kodwa futhi aphakeme, samakamelo amancane kanye Suites. Kwelinye igumbi ngalinye - kuvulandi ezinkulu kukho lapho ungabona pool noma ulwandle. Ziyakwazi-moya, kukhona wonke Izinsiza. Okokuqala, mini-bar, angasetshenziswa njengendlela esiqandisini. Namanje kukhona ithelevishini LCD nge ezihlukahlukene iziteshi, ngaphezu ke, ungafaka USB flash drive. Kukhona yokugezela noma eshaweni nge hairdryer kanye zokugeza, ephephile (mahhala). emibhedeni kanokusho, amafasitela yonke indawo engezansi. Kukhona konke okudingayo, itiye kanye ikhofi, itiye izikhwama, kuhlanganise creamers, ngokuletha nsuku zonke. ingcindezi Amanzi ngokuvamile ezinhle. Uma into akusebenzi, ku ucingo lomshado zonke izinkinga kuyaqedwa ngokushesha. Inani nsuku zonke ukuletha amalitha eyodwa nengxenye amanzi ebhodleleni. embhedeni Huge, elithambile njengoba imibhede feather, futhi ngesikhathi esifanayo, omatilasi Bamathambo. Stow Ihhotela Hilton Hurghada Long Beach 4 * Hurghada ahlanzekile, amathawula washintsha nsuku zonke. Sabalalisa embhedeni izimbali fresh, "kuhle" noma ezinye tinongo ahlanzekile agcwele izinhlanzi namahansi, kungakhathaliseki ukuthi uzinikeza ithiphu noma cha. Kusukela phansi tiled, futhi ebusika kungaba abandayo, yokwamukela ungacela Slippers. On masimu futhi balcony - Ababazi bakha izihlalo kanye itafula ingilazi. Yokugezela akuwona kuphela iqoqo "gel-imoto", kodwa futhi neminye imikhiqizo yezimonyo, ezifana moisturizers.
Izakhamuzi eziningi owashiya kuzibuyekezo ehhotela, bhala ukuthi uthanda ukuhlala endaweni Bungalow emaphakathi isakhiwo ezintathu storey. Kukhona amakamelo olulodwa, futhi zitholakala kule migwaqo eside, ngakho audibility kangcono. Zonke kakhulu ngokuza Bungalows ezilethwa imoto kagesi. Iyisonto amagumbi amahlanu (Suites) ngamunye abathandi zobumfihlo. Ngaphezu kwalokho, kungcono ethule, esihlala abantu abangaphansi kanye zasemazweni ngaphezulu. Ezinye Bungalows sekuseduze kangaka kolwandle ukuthi ebhishi kusukela ekungeneni nje amamitha ambalwa. Nokho, bakude ngokwanele kude zokudla, amachibi okubhukuda nasezindaweni zokudlala. Ngakho-ke, ezinye zezivakashi ziye ayethanda ukubukeza zonke izindawo zokuhlala nemindeni. Konke amakamelo kabili, ngakho abazali ungakwazi ukujabulela uhambo lwakho khona ngokugcwele, okufaka eyabangani ingane yakhe, onesifo embhedeni wakhe, futhi i-TV.
Indlela ukondla izivakashi
Uhlelo ugesi lapho usebenza Hilton Hurghada Long Beach Resort 4 * - AI, okungukuthi "zonke okufakayo". Izivakashi ukondla uhlobo "lezitsha" at zokudlela ezimbili - "Lotus", lapho ungakwazi Dine esibheke kwechibi, esitezi sesibili, esikhungweni "al dente". Kodwa lokho akuyona yonke oyivulile zokudlela eziningana "a la Carte" - "yesikhulumi" futhi "Marhaba". Kugcine ngokukhethekile cuisine waseGibhithe. Basebenza ikakhulukazi kusihlwa. Lezi zokudlela yaziwa ngokuthanda hhayi kuphela ubuhle nokukhetha okukhulu izitsha, kodwa futhi enhle elinempahla yasendlini. Futhi phakathi imigoqo ekhethekile sport ethandwa lapho ngisho ebanjwa umncintiswano langempela.
izivakashi Catering ikakhulukazi udumo - kuba zahlukahlukene kakhulu, eziningi inyama kanye nenhlanzi. Ngesikhathi sokudla kwasekuseni amaqanda ikakhulukazi ngiyocasha, amasosishi salami, amaqanda abilisiwe, ushizi, eziningi baking. Vele uma ukupheka Pita isinkwa esisha. Ngesikhathi sokudla kwasemini banikela isobho ezahlukene umGibhithe isitayela, irayisi, i-pasta, amazambane. Izivakashi ukudumisa kyufta, iCalamari ethosiwe, izoso kwakusihlwa (inkukhu, turkey, duck, tuna kebab newundlu). ikhabe simnandi kakhulu, amnandi tangerines waseGibhithe kanye amawolintshi, ubhamubhamu, and bananas kanye nezinsuku. Futhi, njengoba kuhlale kunjalo ku zokungcebeleka empumalanga, Hilton Hurghada Long Beach Resort Indawo abantu (Egypt, Hurghada) inikeza izivakashi zayo ezihlukahlukene kophudingi - ehla kakhulu, pancake nge ehlukahlukene nososo amnandi, amakhekhe. Ukudla kwasekuseni ayihlanganisi ayo kusukela iphakethe, futhi fresh yangempela, futhi akazange ngisho ukuhlangabezana ngamunye "emihlanu". Ngo Amabha ungakwazi adle, hhayi nje ukudla - Burgers izivakashi amazambane "mahhala", izinja hot, pizza. Izivakashi uthi izinga ezinhle utshwala, ikakhulukazi ubhiya. Kabili ngosuku, kumlethela okumnandi kakhulu-ice cream. Kuyinto ikhofi okuhle, ikakhulukazi nge donuts. Njalo kusihlwa e-yokudlela main uhlela sokudla ezinezihloko - Egyptian ebusuku, isiGreki, isiNtaliyane, isiRashiya, kanti ezinye isidlo esikhethekile "Chef" ... ebusuku bonke abakhona egumbini wambuza izivakashi ezikuthandayo indlela ukudla. Ibha pool eduze umshini umndeni ikhofi izindlu silungiselela cappuccino kakhulu.
Izikhungo ehhotela Hurghada Wena Long Hilton Beach ke abantu abajwayele ukuvakasha kuyona 4 * Izibuyekezo baye uqambe zahlukahlukene kakhulu futhi kusezingeni eliphezulu. Lapha ungakwazi ukuqasha imoto nemali ukushintshana phezu Upondo waseGibhithe, geza izingubo ezihlanzekile futhi iqalele up, ngokusebenzisa izinsizakalo wezinwele nobuhle salon. Ehholo ngokuvamile ahlale laptops futhi babejabulela ehhotela "Wi-FEMA." Endaweni yokwamukela izivakashi imahhala, futhi abambe kahle - okungenani, izivakashi ungenawo akhononde. Kodwa isivakashi ngasinye Ungayisebenzisa akukho isikhathi esingaphezu kwehora usuku. Kukhona internet ikhokhwe, futhi kubiza cishe ezintathu zamadola ngehora. Ngemidlalo abathanda akukho nje ejimini kodwa endaweni ekhethekile volleyball ne ithenisi ezinkantolo. Salon nge ezihlukahlukene beauty zokwelapha, ukubhucungwa, Jacuzzi kanye sauna - futhi amasevisi izivakashi. Ingabe ikhona Hammam kanye pedicure izinhlanzi. Ngamanani SPA isikhungo kuyafana e Hurghada, nje akudingeki uchithe isikhathi endleleni. Izingane azigcini nje isikhala, kodwa futhi igumbi (noma kunalokho, yonke indlu) amageyimu. Vula futhi mini-club. Nge izingane bangahlala sitter, futhi yokudlela has a imenyu ekhethekile nezihlalo eliphezulu. izithombe izingane Excellent sika. Ngisho nomncane futhi kuyenze igweme ngokushesha baqala ukudlala futhi umdanso nabo. Umbukiso kanti futhi kuhle abadala. Nsuku zonke kuba imincintiswano ezahlukene, lokwentiwako, umlingo namasu. Abenzi be-animation izivakashi kusukela ekuseni kuze kube kusihlwa. Uma othile efuna ukudansa at disco komuzi, ibhasi kuzokusa izihlele amahora amabili nantathu, futhi uthathe emuva ezine nobusuku obuthathu. Ngaphezu kwalokho, ngaleso Hilton Hurghada Long Beach Resort Indawo abantu (Egypt) futhi ube umdanso abo phansi. A disco ngokuvakashela - uhambo olujabulisayo ku yacht - izivakashi athandwa kakhulu. I-hookah kungenzeka nje kuphela isifiso sokuba ngibheme emasikweni Oriental lasendulo, kodwa futhi silalele nomculo. Ngesikhathi hhotela njalo ku Iphoyisa futhi ine inkonzo zayo zezokuvikela. Ihhotela ibhasi ithwala izivakashi maphakathi Hurghada ngamaRandi ezimbili (lapho futhi emuva). Lapho, izivakashi ukushiya amahora amabili bese uyasuswa.
Sea, pool, lolwandle
Njengoba kushiwo ngenhla, ihhotela Hilton Hurghada Long Beach Resort 4 * (Hurghada) umi phezu front line. Lokhu kusho ukuthi kusukela isakhiwo kuze kufike elwandle ezimbalwa kuphela amashumi amamitha. Anakho omunye emabhishi engcono kule ndawo. It ngempela mude kakhulu - amakhilomitha angaba nengxenye. Ngesikhathi sebehlezi ogwini kukhona ilanga loungers, emphemeni izihlalo, baphathe nezambulela. Ngena olwandle ayijulile, nice izingane. Kukhona amachweba amabili lapho ungakwazi ukubhukuda, naphezu nokwehla. pontoon eyakhelwe, okuyindawo ukuphumula ozakwehlela amanzi abuke izinhlanzi. Ikakhulukazi kahle ukuza zibabaza nezilwane yasoLwandle Olubomvu ekuseni - kukhona ithuba ukuhlangabezana ezingavamile siklanyelwe ukuphila emanzini. Ungabona izinhlanzi-Napoleon, inhlanzi clown, Stingray, eels Moray. Olwandle uqobo muhle, ne tints of nhlobonhlobo colors - blue, ke oluluhlaza ke okwesibhakabhaka.
Beach likhulu kakhulu, futhi ngenxa yalokho, uma anibuyelanga, kukhona njalo ukuthi kungenzeka yokuthola sunbed khulula ngisho emanzini. Beach ilungele izingane - banayo indawo ibhece emhlabeni, abazange minza noma iqhwa. Nokho, abantu abadala kanye abalandeli izinhlanzi ukuya pier. Ngesikhathi sebehlezi ogwini kukhona imigoqo eziningana lapho ungaba sasekuseni futhi kwasemini. Lapho Unikezwa okumnandi kakhulu ice cream zinhlobo ezine. zokudlala izingane kanye umsebenzi volleyball. Ngaphezu kwalokho, leli hhotela amachibi ongaphandle eziyisikhombisa. Ahlanzekile kakhulu iziteshi, sixhumene. Basuke anesitayela ehlotshisiwe - ne amabhuloho, ukusakaza, izimpophoma. Kube kufanele ugibele efana "umfula oyivila". Ebusuku, basuke kahle kakhulu ezigqanyisiwe. amachibi Iningi etholakala eduze isakhiwo main, lapho reception. Esikhathini Animators efanayo ukuqhuba ukuzilolonga kanye aerobics amanzi. abadala ababili kwathi omunye zezingane okubhukuda sebefudumele. Abasebenzi njalo kuthatha amasampula amanzi, ngakho ungakhathazeki mayelana nokuvikeleka.
Abasebenzi ehhotela Hilton Hurghada Long Beach 4 * (Hurghada) - a ehlonipheke kakhulu, kanye nezinsiza zalo kuyancomeka izivakashi eziningi. Abasebenzi banobungane kakhulu, cishe zonke ngezindlela ezingafani, khuluma ngesiRashiya. smiling Njalo ngizama ukusiza. Basuke friendly, inhlonipho bayehluleka wusizo. Izivakashi eziningi uthi ukuthi akazange uqaphela ukuba luhlaza noma vulgarity. Abaphathi ngokushesha ahlele ukulungiswa, uma into iphuka. amakamelo Hlanza futhi endaweni ngokucophelela. Oweta e yokudlela ngokushesha uyomuka izitsha ezingcolile, ubeke itafula. yokuhlanza abaphathi batibute ngalokujulile izivakashi anentshisekelo ukuthi zisuthe ngokuhle izinga lenkonzo ku Hilton Hurghada Long Beach Resort 4 *. Izithombe izivakashi zisakazwa inethiwekhi, ngokuvamile sigxilise nabo abasebenzi abawuthandayo ehhotela futhi ukubuyekezwa kwawo okuwo ukubingelela. Isebenzisa enkulu kakhulu futhi iqembu ezinhle Animators. Abasebenzi esebenza nezingane, uyazi Russian. Ezokuzijabulisa izingane zidlale nabo, zihlanganisa opopayi, sibadonse akvagrim. Kafushane, konke - the bartenders, abapheki, izinto zokuhlanza, oweta - bayisibonelo sabantu ngezilokotho, amakhono kanye nobuchwepheshe. Hhayi-ke, uma banobungane nabo, khona-ke uyoba amasevisi ezincane ezihlukahlukene ngaphandle kwenkokhelo, kodwa ngenxa nje indawo. Baphatsi ezolile, omuhle, bakwazi ukuxhumana nabantu.
Ihhotela Hilton Hurghada Long Beach Resort 4 * (Hurghada) inikeza izivakashi uhambo abaningi. Okokuqala, libizwa ibhasi ku enkabeni yedolobha. Ngokuyinhloko amaholide ukuya khona ngezinyawo, kanye emakethe ngoba izithelo. Sekuyinto ezishibhile. Ngokwesibonelo, umango angathengwa amadola amathathu kilogram per, strawberry ezimbili, amakhabe eyodwa. Kodwa uhambo Hurghada nazo ngempela ezithakazelisayo (Yiqiniso, uma uthola Umhlahlandlela - uchwepheshe emkhakheni wakhe wokuhlinza futhi hhayi nje "ingilazi ezokuthutha yezitolo"). Phela, edolobheni elidala ungabona isonto Coptic, ukuvakashela villa owayedlalela inkosi yaseGibithe Farouk, i aquarium. Futhi ngemva uhambo indawo uzokwazi ukuzulazula kangcono Hurghada. Kusukela ehhotela ungaya uhambo olude. Lokhu safari engibaziyo noma ibhayisikili isikwele ogwadule, futhi "Venice ehlane" - uhambo e El Gouna, futhi ukuvakasha uye eCairo. Lesi sakamuva kungase kubonakale kabuthaka futhi eyisicefe - konke okufanayo kwamahora amahlanu khona futhi wenze okufanayo, nakuba ngesikhathi amabhasi ukhululekile kakhulu. Kodwa bangaki okuvelayo ongayilindela! Adume Cairo National Museum, Alabaster Mosque kanye LwesiCoptic Church, isikebhe uhambo emfuleni iNayile, kodwa futhi, yebo, imibhoshongo ecijile Giza kanye Sphinx engaqondakali. Mayelana lapho ukuthenga hambo, amaholide imicabango yabantu ahlukana. Abanye o-opharetha ukuvakasha belulekwa kwehhotela, abanye basikisela ukuthatha ikhambo "emgwaqeni" - isimiso esifanayo, kodwa ushibhile kabili.
Hilton Hurghada Long Beach Resort Indawo abantu (Egypt, Hurghada) - Izibuyekezo
Leli hhotela izivakashi ngokuthi umndeni futhi kufanelekile kakhulu izingane. It uyadunyiswa esikhulu oluhlaza endaweni, umoya wokungenisa izihambi futhi inkonzo. Izivakashi abahlala lapha - kungcono ikakhulukazi imibhangqwana, abantu cultured kakhulu futhi ehlakaniphile. Ikholi ukudla yokuphumula ngobuhlanya okumnandi. Ubethula ikakhulukazi bayakwazisa abantu baye baba phesheya eholidini - ku Egypt efanayo noma kwamanye amazwe. Sinenkosi okuthile ukuqhathanisa. Babhala ukuthi leli hhotela wazizwa ekhululekile kakhulu. Akekho ukhathazwa, akazange abeke imikhiqizo yabo, akukho ukuba luhlaza. Kunalokho, ukucabangela futhi benomusa. Kids Club ochwepheshe lwezinga eliphakeme kakhulu. Abasebenzi nobungane. Ngokuvamile, isevisi ehhotela - "aerobatics". IGibhithe ehhotela ezinhle kakhulu futhi ezimnandi, ke olungisisa imali. By endleleni, uma pre-ubhalisa kwisayithi, "Hilton" ke ekufikeni uzonikwa isongo akuyona kumhlophe njengoboya wonke umuntu, futhi orange. Ezinye zezinkampani zokuvakasha kungasiza ukungena esigabeni «VIP» -clients ngesikhathi Hilton Hurghada Long Beach Resort Indawo abantu. Apltravel - omunye wabo. Futhi sibonga yokubhalisa, ungakwazi ukujabulela amalungelo ehlukene (isib, izithelo egumbini, yafakwa mini-bar Coke, Fanta, Sprite, khulula ukufinyelela nsuku zonke yokudlela "a la Carte" "yesikhulumi", izipho out, njalo njalo). Abaningi bakholelwa ukuthi leli hhotela ngisho ufanelwe "emihlanu" futhi Isilinganiselwa walo wamanje phansi. Ngenxa yalesi sigaba intengo emahhotela aphambili kunzima ngisho nokucabanga. Lapho ungakwazi phumula futhi imibhangqwana, kanye nemindeni izingane kanye nabantu abasha. Ukuze isigaba ngasinye, kuzoba ukuzijabulisa wonke umuntu. Mhlawumbe yingakho Izivakashi eziningi ufuna buya lapha futhi.
I-Oceanis Hotel 3 * (i-Crete Greece) - izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa kwamahhotela
Ihhotela "ashile yi Sun" 3 * (Sochi, Krasnaya Polyana): Incazelo, izibuyekezo nezithombe
Armonia Beach Ihhotela (eGrisi, eKrethe.): Ifotho, incazelo kanye nokubuyekeza
Jose Holiday Home 2 * (Goa): izithombe kanye nokubuyekeza
Ukuze ahole "Top Gear": amagama, izithombe
Izimpawu kanye nokwelashwa VSD
Arcanum amandla. Izimpawu Zodiac ngezikhwepha
Ephusheni, ukuqoqa izinto. Dream Ukuhunyushwa: incazelo kanye echaza amaphupho
Mayelana yokudlela "Ukuphakama" (Vladivostok)
Lapho ukungena amakhodi ku "Contra City" futhi ngalokho ababevame kuthiwa
Nojosaka Jack Wolfskin wenza izivakashi
Ihlumela phansi lokushisa umdlezane, ukuze ukulimaza umntwana?
Dry Shampoo Batiste - ithuluzi esisemqoka izinwele ukunakekelwa
Indlela ukugqoka lens
Izinqubo kanye apharathasi of Chemical Technology
Kodiak - nebhere esikhulu kunazo zonke emhlabeni